यी दिन, मोटर चालकहरुलाई अक्सर आफ्नो कार, त्यहाँ सुन्दर नयाँ कार को धेरै छन् किनभने बेच्न, तर पनि उहाँले पायो हात कस्तो मा, आफ्नो विश्वसनीय मित्र संग भागमा त्यसपछि लाग्छ छैन भनेर? सबै कार हामी अक्सर उहाँलाई विदाई भन्न सक्दैन त्यसैले व्यक्तिगत रही पछि। नडराऊ! मुख्य कुरा तपाईं बिक्री मा धोखा छैन भनेर डर।
हरेक मोटरहाक्ने व्यक्ति, कार द्वारा यात्रा तपाईं यो कदम अघि, तपाईं कहाँ यसलाई थप लाभदायक र बेच्न सजिलो हुन सक्छ ध्यानपूर्वक विचार गर्न आवश्यक छैन एउटा सानो वर्ष छ। आजकल खरीद प्रयोग कार मा संलग्न छन् कि धेरै कम्पनीहरु छन्। खरीद महंगा कार, सेन्ट पीटर्सबर्ग मा कार खरिद: तपाईं शायद शब्दहरू विज्ञापन अक्सर देखेको। गरेको यो साँच्चै लाभदायक छ कि छैन भनेर कुरा गरौं?
हाम्रो साथ आओ, आफ्नो कार 15 द्वारा मूल्यांकन हुनेछ - 20% माल को असली मूल्य भन्दा कम, तर तपाईं तुरून्त आफ्नो कार बेच्न आवश्यक छ किनभने यो पक्कै पनि नकारात्मक छ, तर। तर तपाईं पूर्ण मूल्य पुन: प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं मेहनत र कुनै सानो लगानी गर्न कमजोर छैन। तेल परिवर्तन, चमकाने, र कस्मेटिक मरम्मत, र थप। आफ्नो कार साँच्चै छैन त छ भन्ने आफूलाई विश्वास भनेर र मूल्य understate गर्न (धेरै विरलै प्रयोग कार आफैलाई लागि किनेको छ) विज्ञापन (आधारमा तपाईं बेच हुनेछ कसरी) तपाईं प्रतिभाशाली अगाडी बढाना पुग्नु हुनेछ लागि वा बजार मा छोटो समय बहुमूल्य, यो तपाईं देखिन्थे रूपमा, डिजाइन लागि तर पनि फेंक गर्न आग्रह गरिनेछ, र3महंगा मा बजार मा बेच्न हुनेछ, यो यस्तो स्थितिमा प्राप्त गर्न लाजमर्दो हुनेछ। या तपाईं एक महिना वास्तविक खरीदार लागि प्रतीक्षा छ, वा दुई। र यो समयमा कार परमेश्वरको त्यहाँ कुनै पनि समस्या छन् निषेध गरेको छ। त्यहाँ विभिन्न वेबसाइट र समाचार पत्र मा विज्ञापन परिस्थिति तपाईं बजार मा आफ्नो कार बेच्न गर्दा बाहेक छन्, असली खरीदार आउन र 25 हजार rubles फेंक गर्न अनुरोध, तपाईं सहमत छैन। र त्यसपछि मिसिन उडान, थप पैसा लगानी अन्ततः तपाईं पहिलो खरीदार दिनुभएको मूल्य लागि कार बिक्री। यस्तो अवस्थामा एक लाख छन्। तिनीहरूले भन्न रूपमा, avaricious दुई पटक दिन्छिन्।
तसर्थ, सम्पूर्ण, हामी सबै भन्दा राम्रो प्रयास र परीक्षण कार कम्पनी buyout भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं।
आजकल, बित्तिकै त्यहाँ, सच्याउन बित्तिकै कुनै पनि व्यापार वा आर्थिक राम्ररी जा प्रेरित गर्दैन आदर विश्वस्तता रूपमा केही छ, यो आवश्यक सबै अवसरका लागि सहायक विकल्प थियो। त्यहाँ हाम्रो आफ्नै परिवहन वा कर्पोरेट वाहन हो कि, एक कार छ भने, बस दृढ को कर्मचारीहरु संग कार र तालिका सभाहरूमा किन्न कम्पनी कल, सजिलै आफ्नो लक्ष्य हासिल।
सिफारिस - साइट http://autossale.ru/
टोयोटा Avensis: समीक्षा
कसरी घर मा नरक खाना पकाउनु: तीन व्यञ्जनहरु
"Boeing-797" - विश्व मा सबै भन्दा राम्रो यात्री विमान
समीक्षा र दबाइ सत्य: एक संरचना "rivanola" को प्रयोग गरेर कपाल हटाउने
तेज ट्यांक बीटी-7 रक्षा को लागि सिर्जना भएको थियो
योनी microflora पुनर्स्थापना लागि मोमबत्ती: को "फाइदा" र प्रयोगको को "बुरा"